Trano 170㎡ Solo any Beijing, Trano Mekanika Estetika ho an'ny Media Automotive - Faucets an-dakozia tsara indrindra 2021 | Faucets efitra fandroana tsara indrindra | WOWOW Faucets
Home / Interior design / Fandraisana an-trano 170㎡ Solo any Beijing, trano anajika fanaingoana ara-mekanika ho an'ny olona mpampita vaovao momba ny fiara
2021 / 05 / 30 FisokajianaInterior design 6268 0
Nabokov, izay nandany ny androm-piainany nitady ny sisintany iraisan'ny siansa sy ny zavakanto, dia nilaza indray mandeha hoe: "Ny famoronana dia isan'ny fitovian'ny zavakanto sy ny filan'ny siansa". Ny fampifangaroana ny fakany teknika anatiny sy ny sehatry ny kanto hita maso dia mampizara roa ny fiainana ary mitondra traikefa vaovao amin'ny fiainana onenana.
Ity no tranon'ny haino aman-jery fiara fitateram-be taona. Ny tranon'ny Tao dia mijanona ao amin'ny Lincoln Park, trano onenana ara-tontolo iainana ao Yizhuang, faritra ivoaran'ny fampandrosoana indostrialy any Beijing. Ny tompon-trano dia maniry toerana honenana izay sady milamina no azo zahana, feno fahalalahana ary fikarohana mizana.
Red Hill Design dia mampifangaro ny asa-tanana mekanika mitombina amin'ny lamaody kanto, mampiasa teknika famolavolana hanoratra teny fanalahidy samihafa ho fikasana marobe, manamboatra ny habaka manokana.
Ny toetran'ny tompony sy ny fahazarany dia ho lasa taolana amin'ny habakabaka, manome loharanom-piainana lehibe tsy misy fiafarany.
Ny seza Oksen dia manolotra fanehoan-kevitra miavaka sy matanjaka, manjaka amin'ny fahatsapana voalohany ny habaka.
Ny habaka dia misy ny loko mainty, fotsy ary fotsy fotsy. Amin'ny fandanjalanjana ny refy sy ny faritra eo anelanelan'ny telo, miaraka amin'ny fampifangaroana ny hoditra, ny vy ary ny fitaratra, dia voadio tsara ny firafitry ny trano.
Miorina amin'ny toetran'ny tompony sy ny maha-matihanina azy, ny mpamorona dia nanomboka nidina avy amin'ny firafitry ny trano miovaova, ary nanatsara ny efitrano fatoriana telo metatra toradroa 170 metatra toradroa tamin'ny fomba "tsy mahazatra", ary nahatonga azy io ho iray efitra fatoriana, efitra fandroana iray misy lakozia misokatra.
Ny bar, sofa, talantalana ary fizarazarana dia mizara tsy misy dikany ny fizarana. Ireo faritra miasa samy hafa dia tsy miankina amin'izy samy izy, fa kosa manana fahatsapana ny fikorianany.
Ny kapoka famolavolana ny fahatsorana sy ny fahatsorana dia mandika ny hatsarana madio sy ny fomba fiainana madio, izay mifanaraka amin'ny tombotsoan'ny olom-banona an-drenivohitra ankehitriny. Izy io dia azo ampiasaina hiatrehana ny enta-mavesatra ary koa hankafizanao ny faran'ny fiainana.
Ny fametrahana rindrina dia avy amin'ny mpanakanto Yu Yang. Avelany hanana tsipika gadona mozika amin'ny fiarahan'ny episodika sy minimalism ny tsipika. Avelany hihaino ny lokon'ny lokony miloko isika.
Peony, 120cmx120cmx17cm, ranomainty sy loko amin'ny taratasy, hazo, 2018
“Tiako ny manohitra ny lalàna raikitra sy ny fomba fiasa mahazatra.
Famolavolana ny fomba fijerin'ny olona ny sary hosodoko ary
Mba hamerenana azy amin'ny sehatra ara-panahy mankany amin'ny toerana tena izy.
Ny fifandonana amin'ny rafitra mirindra sy ny fahatsapana ny zavakanto dia mitondra fahalianana bebe kokoa amin'ny habakabaka ary manangana lamina kanto sy mirindra ankehitriny. Amin'ny loko mangina dia ekena ny fotoana fampiononana. Ny hevitry ny trano dia miharihary tsikelikely amin'ny fikitikitiky ny fo.
Ny vina dia voatarika amin'ny alàlan'ny sakana mirona, ary ny singa fitaratra dia mamorona firafitry ny habaka. Ny fihetsika tsy misokatra sy misokatra dia mitarika toerana malemilemy iray hafa.
Miditra amin'ny efitrano fatoriana, misy faritra birao an-trano amin'ny lafiny iray. Ao amin'ny loko volondavenona maivana ary namboarin'i Pandomo sy ny vato, ny fitaovana toy ny vy, ny fitaratra ary ny hoditra dia mifamatotra sy mifandona, mitondra hatsarana mifandanja.
Ho an'ny olona maoderina dia milomano foana ny toetra sy ny tontolo iainana. Ny fanjakan'ny tokantrano koa dia mila fahatsapana "fikorianana" hitondran'ny olona fiainana mahafinaritra kokoa ny olona. Ity fahatsapana fikorianana ity dia hita taratra amin'ny fihenan'ny tsipika misy ny habakabaka sy ny fahalalahan'ny asany.
Ireo talantalana fotsy tsy misy fotony dia mitazona ny fahatsapana mangarahara amin'ny habaka ary maneho ihany koa ny toetoetran'ny fiainana an-trano sy tanora tsy tanterahina. Ny talantalana sy ny birao dia mihidy ny habaka birao, ary misaraka voajanahary amin'ny efi-tranony koa, ary mitana anjara toerana amin'ny fizarana ireo faritra miasa.
Ny fanaka ergonomika sy mirindra dia mampifandray am-pahakingana ny filan'ny fitehirizana, ny birao ary ny fialamboly, ary mandamina indray ireo birao miasa mba hanomezana dikany bebe kokoa ny habaka.
Ny sakana vita amin'ny beton dia toy ny vodin-damosin'ny fandriana, mihantona amin'ny toerana iasana sy ialofanina. Eo ambanin'ny feo volondavenona ambany tototra, mitondra fifandimbiasan-toerana malefaka sy malefaka io.
Ny jiro dia mitondra traikefa fitsaharana misaintsaina, manatsara ny halalin'ny habakabaka ary mamorona sosona habakabaka lalina sy mahavariana.
Linear Ink Object ", 120cmx80cm, loko amin'ny taratasy vary, hazo tung, 2019
Ny habaka fotsy izay ifamatoran'ny tsipika fahitana dia fitambarana sary hosodoko sy volavolan-tsarimihetsika izay nampidirin'ny tompon-trano tamin'ny tranony vaovao. Ny zoro kely voahodidin'ny zavakanto dia toerana hanohanana ara-panahy.
Amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny fampiasana ny habakabaka, ny hazavana ary ny rivotra amin'ny torimaso sy ny toeram-piasana, ny mpamorona dia namorona tontolo iainana voajanahary sy tsiranoka ary malefaka, mampifandanja ny fifandraisana misy eo amin'ny asa sy ny fiainana.
Ny habaka iainana dia manana rafitra miasa isan-karazany sy haavon'ny fahitana. Ity dia fotokevitra lehibe iray iainana amin'ny vanim-potoana taorian'ny valan'aretina, manantena ny maodely fonenana malalaka sy voalanjalanja kokoa.
Anaran'ny tetikasa ｜ Trano Lincoln Park Tao
Toerana ｜ Beijing, Sina
Tetikasa ｜ Trano fonenana
Faritra tetikasa ｜ 170㎡
Daty famitana ｜ 2020
Famolavolana anatiny Mountain Volavolan-tendrombohitra mena / HONG Designworks
Famoronana endrika ｜ Dang Ming, Li Dandi
Ekipa mpamorona ｜ Xie Xu, Wang Qing, Ao Qinge, Qu Miao
Niorina tamin'ny 2002, HONG Designworks dia orinasan-drafitra famolavolana fifehezana marobe miaraka amin'ny fomba fijery iraisam-pirenena miorina ao Shina. Ny serivisinay dia mandrakotra birao, trano fivarotana, trano fandraisam-bahiny, fialamboly sy fikarakarana ara-pahasalamana, kolontsaina ampahibemaso sy karazana habaka hafa, miaraka amin'ny fanaraha-maso mazava tsara hahatratrarana ny fampiharana mahomby, miaraka amin'ny serivisy matihanina sy ny endriny farany hanolorana ireo asa iraisam-pirenena sy samihafa. ny fanahin'ny fotoana.
Nianatra tao Düsseldorf, Alemana izy, teo ambany fitarihan'ny tompon'ny famolavolana alemanina Prof. Helfried Hagenberger, ary nampianatra tao amin'ny Sekolin'ny Kanto sy ny Volavola ao amin'ny Oniversiten'i Saizian'ny Siansa sy ny Teknolojia. Hainy tsara ny mampifangaro vina iraisam-pirenena sy ny traikefa eo an-toerana hamoronana habaka an-tanàn-dehibe izay mandrisika ny saina. Nasaina ho mpikambana ao amin'ny jury ao amin'ny Frame Awards 2021 any Netherlands izy, ary voafantina ho iray amin'ireo 40 mpamorona tanora manan-kery indrindra latsaky ny 40 taona any Azia.
Previous :: Inona ny marbra misy rano? Next: Fomban'ny MUJI, lamina mirindra sy mihaja | Jushe United
2021 / 08 / 15 3715
2021 / 08 / 15 4579
2021 / 08 / 14 3919
2021 / 08 / 14 3714